Monday 6th December 11:38 Abdur Razzak took 4-14 as Bangladesh won by 65 runs to open a 2-1 lead in the one-day series with Zimbabwe.	Prosper's positive spin
Wednesday 3rd March 14:15 Zimbabwe are hoping to build on their T20 success in the opening one-day international with West Indies on Thursday.	Zimbabwe crush Kenya again Sunday 1st February 17:01 Zimbabwe claimed a 66-run win over Kenya in Nairobi on Sunday to open a 4-0 lead in the one-day series.	Zimbabwe prosper in Nairobi
Saturday 31st January 16:30 Prosper Utseya's unbeaten 68 led Zimbabwe to a series-clinching four-wicket win over Kenya in the third one-day international.	Utseya eyes Test return
Saturday 19th January 09:37 Zimbabwean skipper Prosper Utseya is hoping a run of good results will see the country return to the Test arena.	Video